စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းစွန့်ပစ်နှုန်းနှုန်းများကိုတိုင်းတာ၊ တားဆီး၊ လျှော့ချနည်း။ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 22, 2020 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 22, 2020 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားအွန်လိုင်းမှငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင် site မှ ၀ ယ်ရန်အမှန်တကယ်မည်မျှကြိုးစားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲအံ့အားသင့်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အသစ်တစ် ဦး တွင်သူတို့တစ်တွေငွေတစ်တန်ထည့်ဝင်သည့် site တစ်ခုရှိပြီး home page မှစျေးဝယ်လှည်းသို့သွားရန်အဆင့် ၅ ဆင့်ရှိသည်။ ဒါဟာဘယ်သူ့ကိုမှဒီလောက်လုပ်နေတာအံ့ဖွယ်ပဲ။
၎င်းသည်မူလတန်းမေးခွန်းတစ်ခုကဲ့သို့ထင်ရသော်လည်းသင်၏စျေးဝယ်လှည်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်သင်၏အီလက်ထရွန်းနစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်သို့လာရောက်သူတိုင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည် is ည့်သည်များသာဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုစျေးဝယ်လှည်းသို့ထည့်ပြီးထို ၀ ယ်ခြင်းတွင်မပြီးဆုံးပါ။
Shopping Cart စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုသည်မှာအလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး သည်အွန်လိုင်းအမှာစာအတွက်ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်၊ သို့သော် ၀ ယ်ခြင်းမပြီးဆုံးမီလုပ်ငန်းစဉ်မှထွက်သွားပါက
များစွာသောစျေးဝယ်သူများသည် ၀ ယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးဝယ်လှည်းသို့လှန်ပြီးထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စုစုပေါင်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ပေးပို့မည့်နေ့ကိုသာတွေ့မြင်လိုပေမည်။ လူတို့သည်စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းကိုစွန့်ခွာရသည့်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။
သင်၏ဂူဂဲလ် Analytics ကိုသင်၏အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနေပါကသင်လုပ်ရမည် setup ကိုအီလက်ထရောနစ်ခြေရာခံ သင့် site ပေါ်တွင်။ သင်၏စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Conversions> Ecommerce> Shopping Behaviour တွင်တွေ့နိုင်သည်။
လှည်းစွန့်ပစ် - ဤပစ္စည်းသည်စျေးဝယ်သူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းကိုလှည်းထဲသို့ထည့်ပြီးမ ၀ ယ်ပါ။
ထွက်ကုန်စွန့်ခွာ - ဤသည်မှာ ၀ ယ်သူအားငွေထုတ်ချေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
abandonment browse ဤသည်မှာသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသော်လည်းမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမျှလှည်းထဲသို့ထည့်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား၍ မသွားဘဲမှတ်ပုံတင်ထားသောစျေးဝယ်သူဖြစ်သည်။
သတိထားပါ ပျမ်းမျှအား စာရင်းအင်းမဆိုအမျိုးအစားပေါ်နှုန်းထားများ။ သင်၏သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏နည်းပညာစွမ်းရည်များ၊ ဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံကောင်းဖြစ်သော်လည်းသင်၏စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းလမ်းကြောင်းကိုငါ ပို၍ အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှ - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှည်းစွန့်ပစ်မှုနှုန်းသည် ၇၅.၆% ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းပျမ်းမျှ - ၈၅.၆၅% သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်ပျမ်းမျှစွန့်ခွာမှုနှုန်းဖြစ်သည်။
အရောင်းဆုံးရှုံးမှု - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စွန့်ပစ်ထားသောစျေးဝယ်လှည်းများမှတစ်နှစ်လျှင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံအထိဆုံးရှုံးသည်။
ဤအချက်အလက်များကိုအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ် ၅၀၀ ကျော်မှရယူထားပြီးအဓိကကဏ္ sectors ခြောက်ခုမှစွန့်ခွာထွက်နှုန်းကိုခြေရာခံသည် အရောင်းအဝယ်cle.
ဘဏ္ဍာရေး - ၈၃.၆% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းရှိသည်။
non-အမြတ် - ၈၃.၆% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းရှိသည်။
ခရီးသွား - ၈၃.၆% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာမှုနှုန်းရှိသည်။
လက်လီ - ၇၂.၈% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ပစ်မှုနှုန်းရှိသည်
ပုံ - ၇၂.၈% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ပစ်မှုနှုန်းရှိသည်
ဂိမ်း - ၇၂.၈% စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ပစ်မှုနှုန်းရှိသည်
သင်၏စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေပါ - စျေးဝယ်သူ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာကိုစက္ကန့်နှစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လအတွင်းအလိုလျောက်ဖွင့်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ် - စျေး ၀ ယ်သူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့်လှည်းမှထွက်ခွာကြသည်။
အချိန်ကန့်သတ် - စျေးဝယ်သူ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်အချိန်ကုန်မှုကြောင့်လှည်းမှထွက်ခွာကြသည်။
ရေကြောင်းအချက်အလက်မရှိပါ - စျေးဝယ်သူများ၏ ၂၂% သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်မရှိသောကြောင့်လှည်းမှထွက်ခွာကြသည်။
ပစ္စည်းပြတ် - စျေးဝယ်သူ ၁၅% သည်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုမပြီးနိုင်သောကြောင့် ၀ ယ်ခြင်းကိုမပြီးနိုင်ပါ။
ညံ့ဖျင်းသောထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှု - စျေးဝယ်သူ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ၀ ယ်ယူမှုမပြီးနိုင်ပါ။
ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ကိစ္စများ - စျေးဝယ်သူ ၂% သည်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကြောင့်ဝယ်ယူမှုကိုမပြီးစီးပါ။
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာ, အကြံပြုပါသည် 15 နှင့် 50 စမ်းသပ်မှု…ရပါတယ် 15 နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးနှင့် 50 နှစ်အရွယ် လူကို သင်၏ site မှတစ်ခုခုဝယ်ရန် သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြသလဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းခဲ့သလဲဆိုတာကိုဂရုပြုပါ။ မင်းကြည့်ရုံနဲ့တစ်တန်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ သင်လုံးဝစွန့်ခွာခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်းသင်လျှော့ချနိုင်သည်။
စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းကိုလျှော့ချရန်မှာအရေးကြီးသည်အထက်ပါစွမ်းဆောင်ရည်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ယုံကြည်မှုပြissuesနာများကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ငွေစာရင်းစာမျက်နှာကိုတိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
performance - desktop နှင့် mobile နှစ်ခုလုံးတွင်သင်၏ page စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်ရန်သေချာပါစေ။ လူများစွာသည် visitors ည့်သည်များမပါသည့် site ကိုလူအများကစမ်းသပ်ကြသည်။ သူတို့အားလုံးလာသောအခါ site သည်ပျက်သွားသည်။
မိုဘိုင်း - သင်၏မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံသည်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလုံးဝရိုးရှင်းကြောင်းသေချာပါစေ။ ရိုးရှင်းသည့်စာမျက်နှာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုများနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမားသောနှိုင်းယှဉ်သောခလုတ်များသည်မိုဘိုင်းပြောင်းလဲမှုနှုန်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တိုးတက်မှုအညွှန်းကိန်း - ၀ ယ်သူအားမကျေနပ်နိုင်အောင် ၀ ယ်ယူရန်အဆင့်မည်မျှကိုသင့်စျေး ၀ ယ်သူအားပြပါ။
လှုပ်ရှားမှုသို့ဖုန်းခေါ်သည် - ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်စျေး ၀ ယ်သူကိုမောင်းနှင်သည့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊
navigation - လူတစ် ဦး အားယခင်စာမျက်နှာသို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါစျေးဝယ်ခြင်းသို့ပြန်သွားနိုင်သည့်ရှင်းလင်းသောလမ်းညွှန်ချက်။
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် - အသုံးပြုသူတင်ပြသည့်ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအမြင်များ၊ ချဲ့ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပေးအပ်ရန်အတွက်စျေးဝယ်သူများကသူတို့လိုချင်တာကိုရရှိနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ကူညီပါ - စျေးဝယ်သူများအားဖုန်းနံပါတ်များ၊ စကားပြောခြင်းနှင့်ကူညီသောစျေးဝယ်ခြင်းများကိုပင်ပြုလုပ်ပါ။
လူမှုအထောက်အထား - ထည့်သွင်းပါ လူမှုရေးအထောက်အထား အခြားစျေးဝယ်သူများကသင့်ကိုယုံကြည်သော popups နှင့်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံစာများကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ။
ငွေပေးချေမှုရမည့်ရွေးချယ်စရာ - ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ငွေပေးချေခြင်း (သို့) ငွေကြေးနည်းလမ်းအားလုံးကိုပေါင်းထည့်ပါ။
လုံခြုံရေးတံဆိပ်များ - လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားပြင်ပမှတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်ကိုစျေးဝယ်သူများအားအသိပေးသည့်တတိယပါတီစစ်ဆေးမှုများမှတံဆိပ်များကိုပေးပါ။
ပို့ဆောင်ခြင်း - ဇစ်ကုဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်။ ခန့်မှန်းရမည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်နှင့်ကုန်ကျငွေကိုရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းပါ - visitors ည့်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏လှည်းကိုနောက်မှသိမ်းဆည်းရန်၊ လိုချင်သောစာရင်းထဲသို့ထည့်ရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အီးမေးလ်သတိပေးချက်များရရန်နည်းလမ်းများကမ်းလှမ်းပါ။
အရေးတကြီး - ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းတိုးမြှင့်စေရန်အချိန်နှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးလျှော့စျေးများသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက် - ရည်ရွယ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းပါ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ကုန်ပစ္စည်းအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်ပါ။ စျေး ၀ ယ်သူထွက်သွားလျှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းပါ၊
သင်၏ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစျေးဝယ်သူများကိုဖမ်းယူပြီးအီးမေးလ်ပို့သည့်မယုံနိုင်လောက်သောအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းအချို့ရှိသည်။ သင်၏ဈေးဝယ်သူများကိုသူတို့၏လှည်းထဲတွင်ပါသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူနေ့စဉ်သတိပေးချက်တစ်ခုပေးပို့ခြင်းသည်၎င်းတို့အားပြန်လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေး ၀ ယ်သူတစ် ဦး သည်ငွေရရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ စွန့်ပစ်ထားသောစျေးဝယ်လှည်းအီးမေးလ်များသည် spam မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည်မကြာခဏအထောက်အကူပြုသည်။ သင်၏စျေး ၀ ယ်သူသည်ထိုလှည်းအတွက်သတိပေးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သင်၏အီးမေးလ်ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Klaviyo or လှည်း Guru အလိုအလျောက်ဤအမျိုးအစားသည်။ သူတို့မှာတောင်ရှိတယ် စွန့်ခွာ browse နှင့် Out-of- စတော့ရှယ်ယာသတိပေးချက်များ သူတို့ရဲ့အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်!
ဒီကနေ infographic ပိုက်ဆံရှာခြင်း သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်ရန်နှင့်စျေးဝယ်ခြင်းလှည်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်ကြီးစွာသောအကြံဥာဏ်များရှိသည်။ သူတို့က“ ရှောင်ရှားခြင်း” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုကျွန်တော်သုံးတယ်၊ ဘယ်သူမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုရှောင်ကြဉ် စျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာသူတို့ရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်။
Tags: စွန့်ပစ်ခြင်းစွန့်ပစ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါစွန့်ခွာ browseလှည်းစွန့်ခွာထွက် - စွန့်ခွာကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာဒီဇိုင်းကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာထုတ်ကုန်e-commerceအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းစျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာ recoverစျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာလျှော့ချစျေးဝယ်ခြင်းတောင်းစျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာစျေးဝယ်လှည်းစွန့်ခွာစာရင်းဇယား
Khoros စျေးကွက် - စီးပွားရေးအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
22:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 50
Buffer plugin ကိုချစ်ခြင်း။
22:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 8, 23
ငါသဘောတူသည်မှာလူများသည်“ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း” သို့မဟုတ်အခြားသူများက ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုမကြည့်ခြင်းကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
အိမ်ကိုထိမိသည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာမြှင့်တင်ရေးကုဒ်နံပါတ်ကိုပုန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အများအားဖြင့်အာမခံနှင့်ကုဒ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန် (သို့) ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအခြား site တစ်ခုကိုရှာရန်ကြိုးစားသည်။
23:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 17
15 နှင့် 50 စမ်းသပ်မှုကိုချစ်!
23:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 48
အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၅၀ နှစ်အရွယ်တို့ထက် ပို၍ ထင်မြင်ယူဆချက်မရှိပါ